Showing ४१-५० of २,०८५ items.
लक्ष्मीमार्गमा नकआउट फुटबल हुने
बेलबारी/ बेलबारी ११ लक्ष्मीमार्गस्थित सोमबारदेखि दोस्रो नकआउट फुटबल हुने भएको छ ।युनिक महादेव क्लवको आयोजना हुने उक्त प्रतियोगितामा झापा, मोरङ र सुनसरीका दस टिम सहभागी रहने आयोजक समितिका कोषाध्यक्ष सचिन राईले जानकारी दिए । असोज २५ गते सम्म युनिक चोक खेलमैदानमा हुने उक्त नकआउट फुटबलको बिजेता टिमले नगद ३०हजार सहित मेडल, ट्रफि र उपबिजेता टिमले नगद २० हजारसहित मेडल, ट्रफि पाउने समितिका कोषाध्यक्ष सचिन राईले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मितिः आश्विन १७, २०७८
कानेपोखरीमा प्रदेश स्तरीय तेक्वाण्दो प्रतियोगिता हुँदै
पथरी । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा १ नम्बर प्रदेश स्तरीय तेक्वाण्दो प्रतियोगिता हुने भएको छ । कानेपोखरी आई.टी.एफ. तेक्वाण्दो डोजाङले शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्रतियोगिता बारे जानकारी गराएको हो । ‘स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद’ भन्ने मूल नाराको साथ आगामी कार्तिक ५ र ६ गते प्रतियोगिता हुने आयोजक डोजाङ्गका अध्यक्ष युवराज भुजेलले बताए । प्रतियोगितामा मोरङ, सुनसरी, झापा, उदयपुर, धनकुटा, भोजपुर, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग, तेह्रथुम र आयोजक डोजाङ्ग बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । प्रतियोगिता पुरुष २० देखि ८० र महिला २० देखि ७० किलो तौल समूह बिच प
साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको सुखद सुरुवात
धरान । साफ च्याम्पियनसिपको तेह्रौं संस्करणको पहिलो खेलमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ ।माल्दिभ्समा शुक्रबारदेखि सुरु भएको च्याम्पियनसिपमा माल्दिभ्सलाई १–० गोलले पराजित गरेको हो । खेलमा मनिष डाँगीले निर्णायक गोल गरेका थिए । नवयुग श्रेष्ठको सट्टामा मैदानमा प्रवेश गरेका उनले खेलको ८६ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । योसँगै नेपालले यसअघिको हारको बदला लिएको छ । यसअघि सन् २०१८ मा भएको पछिल्लो साफको सेमिफाइनलमा माल्दिभ्सले नेपाललाई ३–० गोलले हराएको थियो । नेपालले पछिल्ला ८ खेलमा पहिलोपटक माल्दिभ्सलाई पराजित गरेको छ । यसअघिका ५ खेलमा हार बेहोरेको नेपालले दुई खेल बराबरी गरेको थियो । निर्णायक गोलकर
प्रकाशित मितिः आश्विन १६, २०७८
वराहक्षेत्रको देवीघाटमा फुटबल प्रतियाेगिता हुने
वराहक्षेत्र । सप्तकोसी युवा क्लबको आयोजनामा वराहक्षेत्र नगरपालिकाको वार्ड नं ७ को देवघाटमा असोज २१ गतेबाट क्लब स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता हुने भएको छ । प्रतियोगितामा मोरङ र सुनसरीका ८ टिम सहभागी हुने क्लबले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जनाएको छ । फुटबलमा रानी विराटनगरको पुलिस क्लब राजाबास फुटबल क्लब वराहक्षेत्र–९ हाटखोला फुटबल क्लब वराहक्षेत्र–२, शान्तिनगर फुटबल तरहरा, बक्लौरी युवा क्लब पंचायन,सप्तकोसी युवा क्लब देवीघाट, न्यु स्टार फुटबल क्लब कालाबन्जार र आयोजक निलो सहभागी हुने आयोजक सप्तकोसी युवा क्लबका अध्यक्ष कपिल आचार्यले बताए ।प्रतियोगिताको विजेतालाई नगद ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैँया र
धनकुटा म्याराथनमा रोशन र रेणुका तामाङ प्रथम
धनकुटा । धनकुटामा लामो समय पछि म्याराथन दौड प्रतियोगीता आयोजना गरिएको छ । विश्व मुटु दिवशको अवसर पारेर पुर्व प्रहरीहरुको संस्थाले म्याराथन दौड प्रतियोगीता आयोजना गरेको हो । धनकुटा नगरपालिका वडा नं.७ बसपार्कबाट शुरु भएको म्याराथन दौड प्रतियोगीता सब्जी लाईन, चुलिवन, डाँडागउँ, मदन चोक, भिमनारयण चोक, माथिल्लो कोप्चो, तल्लो कोप्चे हुँदै मदनचोकमा आएर टुङ्गिएको थियो । दौड प्रतियोगीतामा पुरुषतर्फ वरखगण सल्लेरीका नेपाली सेना रोशन तामाङ प्रथम, सबिन राई द्धितिय र शुसिल लिम्वु तृतिय भएका छन् । त्यसैगरी महिला तर्फ नेपाली सेनाकै तर्फबाट रेणुका तामाङ प्रथम, मन्दिरा तामाङ द्धितिय र एलिना लिम्वु तृतिय भए । म्य
एभरेष्ट फुटवल क्लब सेमीफाईनलमा
वराहक्षेत्र / वराहक्षेत्रको चतरामा जारी प्रथम चतरा नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको हिजो भएको खेल जित्दै एभरेष्ट फुटबल क्लव,वराहक्षेत्र,३ नडाहा सेमिफाईनलमा प्रवेश गरेको छ ।ईटहरी फुटवल क्लव लाई ३–० गोलले हराउँदै एभरेष्ट क्लवले सेमिफाईनलको यात्रा तय गरेको हो । खेल शुरु भएको १३ मिनेटमा संजय श्रेष्ठले पहिलो गोल गर्दै जितको खाता खोलेका थिए । मध्यान्तरपछि लगातार दबाब बनाएको एभरेष्टका अर्का अनिस लिम्बुले खेलको ३६ मिनेटमा थप १ गोल गरेर टिम लाई अग्रता दिलाएका थिए । लगत्तै अर्को ५ मिनेटमा कप्तान युवराज श्रेष्ठले निर्णायक तेश्रो गोल गरि जित पक्का गरेका थिए । फाईनल प्रवेशको लागि एभरेष्टले १५ गते हुने अ
प्रकाशित मितिः आश्विन १४, २०७८
२३४ पटक पढिएको
मुटु स्वस्थ राख्न विराटनगरमा न्यूरोको साइकल र्याली (फोटो फिचर)
विराटनगर । विराटनगरस्थित न्यूरो हस्पिटलले विश्व मुटु दिवसको अवसर पारेर सचेतामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।प्रत्येक वर्ष सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी मुटु दिवस मनाउने गरेको न्यूरोले बुधबार विराटनगरमा साइकल र्याली निकालेको हो । बुधबार विहान न्यूरो हस्पिटलदेखि वृहत साइकल र्यालीले विराटनगर महानगरपालिका भित्र नगर परिक्रमा गरेको छ । हस्पिटलदेखि सुरू भएकोे र्यालीले ट्राफिक चौक, रोडेशष, कलेज रोड हुँदै जलजला, तिनपैनी, सिडिओ अफिस हुँदै, अस्पताल चौक, देवकोटा, सिद्धार्थ चौक हुदै बंगालमुखी मन्दिर अगाडि आएर समापन भएको छ ।साइकल र्यालीमा लायन्स क्लब अफ विराटनगर महानगरपालिका, लियो क्लब अफ विराटनगर, नेपाल य
प्रकाशित मितिः आश्विन १३, २०७८
जेएसवाइसी सुन्दरहरैंचा विजयी
वराहक्षेत्र/वराहक्षेत्रको चतरामा जारी प्रथम चतरा नकआउट फुटवल प्रतियोगिताको मंगलबार भएको खेलमा जेएसवाइसी सुन्दरहरैंचा विजयी बनेको छ ।उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको पञ्चकन्या फुटबल क्लबलाई २–० गोलले हराउ“दै जेएसवाइसी विजयी बनेको हो ।जेएसवाइसीका डगेन राई र बिवेस गुरुङ्गले गोल गरे । खेलका म्यान अफ दी म्याच जेएसवाइसीका बिवेस गुरुङ्ग घोषित हुँदै इनु शेर्पाले नगद १ हजार रुपैयाँ र ट्रफी प्रदान गरिन् । प्रतियोगिताको बुधवार हुने क्वार्टरफाइनल खेलमा इटहरी फुटबल क्लब र एभरेष्ट फुटबल क्लब वराहक्षेत्रबीच हुने आयोजक चतरा फुटबल क्लबका सल्लाहकार रोशन श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
नेभर माइन्ड एफसीलाई सुँगुर कप
विजयपुर /धरान–१७ मा सोमबार सम्पन्न सुँगुर कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि नेभर माइन्ड फुटबल क्लबले जितेको छ । सोमबार सम्पन्न फाइनल खेलमा नेभर माइन्ड एफसीले नमस्ते युवा क्लबलाई ३–० गोलले हराउँदै उपाधि जितेको हो । जितका लागि कप्तान प्रनिस राईले २ गोल गर्दा दीपिन राईले एक गोल गरेका थिए । उपाधिसँगै नेभर माइन्डले नगद २१ हजार र उपविजेता नमस्ते युवा क्लबले नगद १० हजार रुपैयाँ पाएको छ । फाइनल खेलका म्यान अफ दी म्याच र सर्वोत्कृष्ट खेलाडी नेभर माइन्डका प्रनिस राई घोषित भए । त्यस्तै बेष्ट मिडफिल्डर नमस्तेका पवन तामाङ घोषित भए । प्रतियोगितामा बेष्ट डिफेन्स प्रज्ज्वल थापा, बेष्ट स्ट्राइकर मार्टिन र
प्रकाशित मितिः आश्विन १२, २०७८
एसपिसीले जित्यो च्यारिटेबल फुटसलको उपाधि
धरान । च्यारिटेबल प्रथम सिंगापुर मितेरी फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि एसपिसी धरानले जितेको छ ।मंगलबार सम्पन्न फाइनल खेलमा एसपिसीले ग्याटिस टिम माथि ५–० गोलले हराउँदै उपाधि जितेको हो । उपाधिसँगै नगद एक लाख ११ हजार १ सय एघार रुपैयाँसहित ट्रफी, मेडल र प्रमाण पत्र पाएको छ । उपविजेताले नगद ५५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँसहित ट्रफि, मेडल र प्रमाणपत्र हात पारे । सर्वाधिक गोलकर्ता एसपिसिका अर्जुन भण्डारीलाई नगद २५ सय प्रदान गरिएको छ । उत्कृष्ट खेलाडि ग्याटिसका समिर गुरुङ्ग र उत्कृष्ट गोलकिपर उपाधि एसपिसिका सारंश भट्टराईले जित्दै नगद २५ सय रुपैयाँ पाए ।विजेता टिमलाई मितेरी फुटसलका अध्यक्ष लुकेन्द्र राई, प्रमु